♪ Angel Shaper: အသိတရားဆိုတာ... ???
နာ ၁ နော်
ဟေ့ နာကတော့ အသိတရား ရှိတယ် ထင်ပါ့
ခိခိ (ကိကိ ရဲ့ ညီမ)
အသိတရား ဆိုတာ ဘာလဲ အိမ်ကျယ် မသိဖူးလား မသိရင် ပြူးပြ အဲ ပြောပြမယ်
အ + သိ + တ + ရား
အဲဒါ အသိတရား မှတ်ထားနော် ဟဲဟဲ
အသက်ငယ်ပေမယ့် အသိတရားပြည့်ဝလို့ ကြိတ်ပြီး လေးစားအားကျရတဲ့ သူတွေ ရှိသလို၊
နာ့ကိုပြောတာရားး ထင်တယ် နာ့ကိုကြိတ်ပြီး လေးစားနေတယ် ဟဟဟ
လေးစားငါးမြှောက်ပြီး ခြောက်ပေါင်းလိုက်နော် ဟဲဟဲ
ဟိဟိ တော်ပါပြီလေ မသောင်းကျန်းတော့ပါဘူး တာ့တာ ၅ နဲ့တင် ကျေနပ်လိုက်တော့မယ် ဟိဟိ
ကိုခလောက် အိပ်နေတုံး သောင်းကျန်းရတာဟ မဟုတ်ရင် သူနဲ့ လု နေရတာ ဟဲဟဲ
ကြည့်လေ .. ဝက်ကလေး တို့အသိ တရာ ရှိပုံများ....
တရာထိတောင် မရေးတော့ပဲ နောက်လူတွက် ချန်ထားပေးတာ လေ .. .. ဂွက်ဂွက်( ဝက်ဝက်ရဲ့အမ.. )
တကယ်ဆိုရင်( အသိ တရား )ဆိုတာလေ..
တရား တာတွေ ကို သိတာ ကို ခေါ်တယ် ..
မတရား တာ တွေ ကို မသိတာကျ တော့
(မသိ မတရား) လို့ခေါ်တယ် .. မှတ်ထား..နော်..သာမီးကြီး ရေ ..း))))
အသိတရား ဆိုတာ တကယ်တော့...
အသိတရား ပါပဲ...လို့ ထင်ပါတယ်...
အမြင်ကောင်းလေးနဲ့ အပြုသဘော ရေးပြထားလို့
အိပ်ရာကနိုးနိုးချင်း ညီမလေးရဲ့ မက်ဆေ့လေးကိုတွေ့လို့ ချက်ချင်းလာခဲ့ပေမယ့် နောက်ကျသွားတယ်နော်...
ငါ့ညီမလေးက ငယ်ငယ်လေးပေမယ့် အသိတရားတွေ အများကြီးပါလားကွယ်...မမတောင် ဒီပိုစ့်လေးထဲကနေ ဖတ်မှတ်သွားရတယ်...
ဆေးလိပ်သောက်တတ်တဲ့သူတွေကို ဥပမာ ပေးထားတာလည်း ကောင်းမှကောင်း...
အသိတရားရှိရှိ လိမ္မာတဲ့ ငါ့ညီမလေး ဒီ့ထက်ပိုပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရပါစေကွယ်...
ရေးပေးတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်...ဖေ့ဘွတ်မှာ ဆုချထားတယ်...ကြည့်လိုက်ဦး... :)))
ပိုစ့်ထဲမှာ .. ခက်ပါတယ် .. ခက်ပါတယ် နဲ့ ပါတော့ တော် တော် ခက်မယ်ထင်ပါတယ် ...
ကျွန်တော် လို သိခြင်းနဲ့ မသိခြင်းကြားမှာ လွတ် နေတဲ့သူတွေအတွက် .. တော့
ခက်သလိုလို .. မခက်သလိုလိုပါပဲ ..
လောကကျင့်ဝတ်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး အသိတရား တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်နဲ့ သူတပါး အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေဖို့ ၊ ပါတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ပြုကျင့် တဲ့ အသိတရားလောက်တော့ ရှိသင့်ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ ကိုယ့်အတွက် အတ္တများလာလေ အသိတရား လျော့ကျလာလေပါပဲ။
ရေးထားတာလေးတွေ မမ တောင် သေချာ မှတ်သွားရတယ်....ရေးတတ်လိုက်တာ...
အသိတရား ဆိုတာ အသားတရိရိ ပေါ့ ဆိတ်ကလေးရယ်
ယလဲ့.... ငမူးတွေ ငမိုက်တွေ ဆေးသမား၊ ဆေးလိပ်သမား.... စသဖြင့်.. ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး အသိ၊ သတိရှိကြစေကုန်လေ။။။။။။။။။ :P
အော် ဟော ငါ့မရှိတုန်း
ဝက် ကတော့ ဖဲ့သွားလေရဲ့ 
အိမ်တစ်ကာ လိုက်တစ်နေတာ ဒင်းတော့
ချီးတစ်ပါစေ အဟတ် အမြဲတစ်နိုင်ပါစေ
အမ် နောက်တစ်ယောက်ကလည်း ဖဲ့ပြန်ပြီ
ငမူးတွေ ဆိုပဲ ဆင်ခြင်ရမယ် ဟုတ်လား
အသိတရားဆိုတာ့ ဘယ်သူ့ မှမပြည့်စုံဘူး
တစ်ကိုယ်တည်းနေလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိလို့ လူတွေနဲ့ အတူနေတာပဲဟ တောထဲနေတယ်လို့ မှမရှိတာကို
ဒီတော့ အသိတရားဆိုတာ က မူမမှန်တဲ့ ခဏမှာ ကိုယ့်စိတ်ကို ထိန်းလိုက်တဲ့ သဘောပဲ
ဒါကို အသိတရားလို့ ခေါ်တယ်
ညီသေးသေးလေးကတော့ အစ်ကိုကြီးကို စောင်းပြောသွားသလားတောင်မသိပါဘူးကွယ်......း((
ဘယ်သူတွေကို စောင်းပြောတာလဲ ဟေ့...
ဆင်တဲကဖေးမှာလည်း အင်ကြင်း တတ်ဂ် လာလို့..။ ချိုကျလည်း ခုမှ အသိတရားကပ်တော့တယ်။ ဟီး .. သူများအတင်း ဒီမှာ လာပြောနေတယ်။ အင်း လင်းကြယ်ဖြူ လည်း အသိတရား လေးတင်ပြသွားတာ ကောင်းပါ့ ... ကောင်ပ့ါ...။
ဟုတ်တယ်။ ကိုယ်တိုင်အသိတရားနဲ့ပြည့်ဝဖို့ ကြိုးစားချင်နေသူပါ။ ဖိတ်ခေါ်မျှဝေပြီး အသိတရားလေးတွေကို အကွက်ကျကျ မက်ဆေ့ပေးတတ်တဲ့ ညီမလေးကို အသက်ငယ်ပေမယ့် လေးစားအားကျရတဲ့သူတွေထဲက တစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်တယ် ညီမလေး။ ဆက်ကြိုးစားပါ။ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေ။
တော်တော်လေးကို မှတ်သားလိုက်နာစရာပဲ.... ချစ်စရာ ချင်းမလေးရေ.......
ဂလို အရေးလေးတွေကြောင့် ပိုချစ်ခင်ရပါ၏။
အောင်မလေး မရေးတတ်ပေလို့ သာပဲ . .
ရေးများ ရေးတတ်ရင် ပါမောက္ခ တင်ရမယ် . .
အခုတော့ လင့်ချိတ်ပြီး ဆရာမ တင်သွားပါတယ် သာမီးကြီးရေ. . .
ပျော့နိုင်ပါစေ. . .
မီးကြီးရေ မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ပါ ညီမလေးရေ...
တပါးသူရဲ့ အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပံ၊ အနာဂတ်ကို